Ngwakọta | Martech Zone
Sọnde, Septemba 24, 2006 Sọnde, Septemba 24, 2006 Douglas Karr
Na ngwụcha izu a, m na-arụ ọrụ na njirimara na atụmatụ azụmaahịa / chọrọ maka Compendium Software, ụlọ ọrụ mụ na onye ọrụ ibe m bidoro maka sọftụwia Social Media Optimization. Nke a bụ oge na-enye obi ụtọ. Anyị nwere ụfọdụ anya site na VC sịrị, nwere oké ngwaahịa ọhụụ… niile anyị chọrọ bụ oge! Anyị abụọ na-arụ ọrụ oge niile nke mere na ọ na-esiri anyị ike ime ya.
Nyaahụ m wuru logo maka ụlọ ọrụ ahụ. Nwere olileanya na ọ masịrị gị!
Lelee saịtị maka nkọwa nke Compendium.
Enwere m ike ịde blọgụ gbasara achịcha?
Mmelite Ọgụgụ peeji
Sep 24, 2006 na 3:53 PM
Ana m anụ isi oke. Nnukwu abụba AIM3 na-esi ísì ụtọ ga-abụ nke ziri ezi. Nchọgharị Google m bịara mara ezigbo unyi; M ga-atụ aro aha ọzọ maka ụlọ ọrụ gị. M ga-agba ọsọ. Wepu. Gbaa ọsọ ọsọ ma ọ bụrụ na AIM3 bụ n'ezie onye otu gị. O yiri ka ị bụ onye na-eguzosi ike n’ezi ihe na onye na-eme omume ọma. Ọ bụghị. Na SMO ziri ezi na nnukwu abụba ya na-adịghị mma. O buru na obughi AIM3… ndo iwepu iwe onye oru ibe gi.
Sep 25, 2006 na 3:04 PM
Ọ bụ ihe dị oke mma maka ụtọ m, gbakwunyere ihe ngosi ahụ na-echetara m karịa eriri DNA, kama mgbasa ozi mmekọrịta ...
Njikọ dị na "ozi" na-aga na blog gị; mana m chere na njikọ a bụ naanị ihe njide ebe…
Ekwesịrị m ịsị na m hụrụ n'anya ochie logo OS OS9 - oke nchikota aka mmadụ, kọmputa, na enyi / mmekọrịta. Ikekwe ihe dị ka nke ahụ?
Nke ahụ kwuru, nke a bụ naanị otu echiche.
Ihe nnọchianya.com bụ isi iyi nke mmụọ nsọ.